Ukuhambelana kothando lwe-Aquarius - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kothando lwe-Aquarius
Ukuhambelana kothando lwe-Aquarius
Indoda ye-aquarius kunye ne-libra woman
Abathandi be-Aquarius bacingelwa ukuba bahambelana kakhulu nee-Aquarius njengazo kwaye zincinci zihambelana neScorpio. Ukuba luphawu lomoya oluhambelana nomqondiso we-zodiac kukwaphenjelelwa bubudlelwane phakathi kwezinto ezine zodiac: Umlilo, uMhlaba, umoya kunye naManzi.
Abo bazalwa e-Aquarius babonisa izinto ezithile xa benxibelelana nolunye uphawu lweempawu zodiodiac kunye nabo. Nganye yezi zinto zidibeneyo zidibeneyo kufanelekile ukuba zixoxwe ngokwahlukeneyo.
Kwisicatshulwa esilandelayo siza kuchaza ngokufutshane konke okuhambelana phakathi kwe-Aquarius kunye neminye imiqondiso yeenkwenkwezi.
Ukuhambelana kweAquarius kunye neeAries
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo olula! U-Aquarius unayo yonke into ayifunayo ukuvutha amadangatye ee-Aries ngamaxesha afanelekileyo ngelixa ii-Aries zisazi ngqo ukuba zibeka nini amandla kwi-Aquarius ezolileyo nebaliweyo.
Ngandlela thile bobabini ngokungazami bafumana izibonelelo zokwenza izinto zisebenze kwaye bade bafeze ezinye zeenjongo zabo ngokusebenza kunye.
Ukuzola okukodwa kwe-Aquarius akuyi kuyiqonda ngokupheleleyo iTaurus enamandla kunye nezinto eziphathekayo. Iinjongo zabo zahlukene kakhulu kangangokuba kunzima kubo ukuba bafumane indawo efanayo xa kufikwa kwizicwangciso zexesha elizayo. U-Aquarius ufuna ukuzinikela ngelixa iTaurus eneenkani iya kuthobela kuphela xa ejonga.
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neGemini
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neCancer
Mhlawumbi bobabini baziva isidingo sokubenza nzima ubomi babo ngokungeyomfuneko. Nangona kunjalo iCancer inenkani kwaye ngokuqinisekileyo iya kufumana imithambo-luvo yeyona nto ipholileyo kunye nokuqonda i-Aquarius.
Ukuhambelana kuka-Aquarius noLeo
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! U-Aquarius unayo yonke into ayifunayo ukuvutha amadangatye ka-Leo ngamaxesha afanelekileyo ngelixa u-Leo esazi ngqo ukuba uza kubeka nini amandla kwi-Aquarius ezolileyo nebaliweyo.
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neVirgo
Lo mqondiso womoya kwaye lo mqondiso womhlaba ngumdlalo ongaqhelekanga! Ngokwendalo bayatsala kwaye bayancedisana njengeethoni ezinobuchule zeVirgo i-Aquarius enamandla.
I-Pragmatic and esengqiqweni iVirgo ngamanye amaxesha siziva isidingo sokuyalela ukuba ubudlelwane babo buhamba njani ngelixa i-Aquarius eguqukayo kwaye inamandla ayizimiselanga ukuthobela kwaye ikhetha ukuhlala kwimimandla ephuphayo kodwa ngandlela thile izinto ziyabasebenzela aba babini.
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neLibra
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye ne-Scorpio
Nangona kunjalo iScorpio inenkani kwaye ngokuqinisekileyo iya kufikelela kwimithambo-luvo yeyona nto izolileyo kunye nokuqonda i-Aquarius. Ngokuzijonga nje kubonakala zilungile kodwa ekuhambeni kwexesha kunye nokudakumba kunokuvela xa kushiywe kungaphikiswa.
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye ne-Sagittarius
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo olula! U-Aquarius unayo yonke into ayifunayo ukuvutha amadangatye eSagittarius ngamaxesha afanelekileyo ngelixa iSagittarius isazi ngokuchanekileyo ixesha lokubeka amandla ku-Aquarius ezolileyo nebaliweyo.
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neCapricorn
Lo mqondiso womoya kwaye lo mqondiso womhlaba ngumdlalo ongenakwenzeka! Ngokwendalo bayatsala kwaye bayancedisana njengeethoni ezinobuchule zeCapricorn iAucarius enamandla.
I-Pragmatic kunye ne-methodical Capricorn ngamanye amaxesha siziva isidingo sokuyalela ukuba ubudlelwane babo buhamba njani ngelixa i-Aquarius eguqukayo kwaye inamandla ayizimiselanga ukuthobela kwaye ikhetha ukuhlala kwimimandla ephuphayo kodwa ngandlela thile izinto ziyaziphumelela ezi zimbini.
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye nePisces
Mhlawumbi bobabini baziva isidingo sokubenza nzima ubomi babo ngokungeyomfuneko. Nangona kunjalo iiPisces zinenkani kwaye ngokuqinisekileyo ziya kufumana imithambo-luvo yeyona nto izolileyo kunye nokuqonda i-Aquarius.
Iimpawu eziphambili zoMhlaba weNja yesiTshayina seZodiac Sign
Amabhongo ama-Aries-Taurus Cusp Man: Iimpawu zakhe eziveziweyo
Leo eyindoda kunye ne-scorpio yokuhambelana kwabasetyhini
umntu obhinqileyo uthandana nentombi
ungayifumana njani indoda elubra yokufuna ukuba ubuye
Indoda ye-gemini enomfazi we-taurus
Indoda ye-gemini iwabetha amava amabhinqa
capricorn indoda ukuthandana capricorn umfazi